Masar ayaa dib u fureysa garoomo diyaaradeed, kuna soo dhoweyneysa dalxiisayaasha. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Masar ayaa dib u fureysa garoomo diyaaradeed, kuna soo dhoweyneysa dalxiisayaasha.
Masar ayaa dib u fureysa garoomo diyaaradeed, kuna soo dhoweyneysa dalxiisayaasha.
Dalka Masar ayaa dib u bilaabay duullimaadyadii caalamiga ahaa waxayna dib u fureen goobo dalxiis oo waaweyn oo ay ka mid yihiin Pyramids-ka weyn ee Giza Arbacadii ka dib in ka badan saddex bilood oo xidhitaanno ah dartiis daacuunka ‘coronavirus’.
Wadanku waxaay xireen garoomada diyaaradeed ee loogu talagay duulimaadyada caalamiga ah waxaana ay xireen goobo caan ah oo taariikhi ah badhtamihii bishii Marso iyadoo ay dawladu u muuqatay in ay yareyso faafitaanka viruska.
Taasi waxay keentay warshadaha dalxiiska, oo ay dowladdu sheegto inay boqolkiiba shan tahay wax soo saarka dhaqaalaha laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya inay la xisaabtami karaan in kabadan 15 boqolkiiba shaqooyinka iyo maalgashiga aan tooska aheyn ee la xiriira warshadaha ayaa lagu soo daray, in la joojiyo.
Soo booqdeyaasha ayaa ku yaraa Giza maalintii koowaad, goobjoogeyaasha Reuters ayaa sheegay, iyagoo intaas ku daray inay ku arkeen kaliya tiro kooban oo dad ah goobta caadiga ah ee la soo buuxiyay.
Ravalonandrasana Maurice ayaa dalxiis u sheegtay: “Waa goob qurux badan, halkan waa meesha aan ku aragno astaamaha Masar waana sababta aan halkaan u nimid.
Dhanka kale, 16 duulimaad ayaa laga dejiyay gegada caalamiga ah ee Qaahira maalintii arbacada, wasiirka duulista ayaa yiri. Laba duulimaad ayaa yimid subaxnimadii laakiin shaashad ayaa muujisay afar duulimaad oo loo qorsheeyay inay ka yimaadaan Toulouse, Kuwait, Tunis iyo Amman.
Wasiirka Dalxiiska iyo Waxyaabaha Qadiimka ah Khaled al-Anany ayaa sheegay in labo duullimaad oo loo qoondeeyay ay subaxnimadii Arbacada soo gaareen garoomada diyaaradaha ee Koonfurta Siinaay iyo Badda Cas oo ay ku jiraan dalxiisayaal ka socda Ukraine.
Gobollada ku teedsan Xeebta Badda Cas iyo sidoo kale Marsa Matrouh ee Badda Mediterranean-ka ayaa loo oggolaaday inay dib u furaan maadaama ay leeyihiin lambarrada ugu hooseeya illaa iyo hadda.
Wasaaradda caafimaadka ayaa diiwaangelisay 68,311 xaaladood oo ah coronavirus iyo 2,953 dhimasho ah.
Previous articlew. faratoon Dalal badan oo Afrikaan ah oo Taageerey Aqoonsiga Somaliland
Next articleRaysal wasaare ABIY oo Sheegey in la rabey in dalka dagaal sokeeye ka bilowdo.